Orinasa sy mpanamboatra USB China | SJJ
Ny USB dia be mpampiasa amin'ny fiainana ankehitriny. Mety ho tsara amin'ny fitahirizana ny fampahalalana sy ny fampitana vaovao. Ao amin'ny tontolon'ny birao tsy misy taratasy, ny antontan-taratasy misy eo amin'ny mpiara-miasa dia tambajotra elektronika +. Saingy mbola hisy ihany ny fameperana, toy ny tontolo tsy mahazatra, tsy misy tontolon'ny tamba-jotra, antontan-taratasy fiarovana tsara an'ny orinasa, ary tontolo iainana ratsy. Mbola be fangatahana ny USB, ary mety ho fanomezana sy fampiroboroboana tena tsara. Manana toerana ampy hanontana dokam-barotra ny USB, hanatsarana ny sarin'ny marika. Ho fanampin'ny ivelan'ny USB LOGO, ny chip dia afaka manamafy orin'asa manao dokam-barotra (horonan-tsary, antontan-taratasy, sary, sns.) Milalao serivisy ampiana lanjany ho azy ny USB, lava ny androm-piainan'ny USB, manao dokam-barotra mandritra ny taona maro, rehefa natomboka, ny marika maharitra ny vokatry ny fanaovana dokambarotra. Ny vokan'ny dokam-barotra dia tsara kokoa noho ny singa fampiroboroboana tsotra hafa. Manampy anao manokana ireo rakotra ara-materialy, fonosana metaly kanto, fonosana vita amin'ny silika / silipo tsara tarehy, izay mety hitondra fahatsapana samihafa amin'ireo mpandray.
Fitaovana: Metal, PVC malefaka, silicone, hoditra + metaly, ABS, acrylic, hazo.
Fahafahana: 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB
Famolavolana: Manana fomba fisaina maro isika. Azonao atao ihany koa ny mamolavola endrika sy endrika.
Fomba fizahana Logo: pirinty Silkscreen, fanontana offset, laser.
Fonosana: boaty taratasy, paosy volory, kitapo vita amin'ny foil.
Teo aloha: Poker Chips
Manaraka: Mpihinana zava-pisotro Neoprene
Disk USB azo entina
Diska Flash USB
Tarika kapila silika USB
Mpanokatra antsy sy taratasy
Snowflake Multi Fitaovana
Vatofototra resin-tanana vita tanana
Lanyards biodegradable Friendly Eco-Friendly